ရွှေမန္တလေးသား တွေဆီ က သင်ယူ ရ မယ့် သင်ခန်းစာ တစ်ခု – GaMone Media
Homepage / Local News / ရွှေမန္တလေးသား တွေဆီ က သင်ယူ ရ မယ့် သင်ခန်းစာ တစ်ခု
ရွှေမန္တလေးသား တွေဆီ က သင်ယူ ရ မယ့် သင်ခန်းစာ တစ်ခု
ရွှေမန္တလေး ဘာကြောင့် ဒီနေ့ အောင်မြင် ခဲ့လဲ? ဒီနေ့ ဖြစ်စဉ် ကို ပြောပြ ပါ့မယ် ရွေမန်းမြို့က အကြီးဆုံး သပိတ် စစ်ကြောင်း ဖြစ်တဲ့ Medical နှင့် Engineer ကို သူတို့ အညှိုး ထားနေတာ ကြာပါပြီ။ ခုတင် ၃၀၀ သင်ကြားရေးဆေးရုံ | သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) နဲ့ အရို းအထူးကု ဆေးရုံ တွေ တန်းစီ ရှိနေတဲ့ ၆၂ လမ်းပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့
သပိတ် စစ်ကြောင်းမထွက်နိုင်အောင် ရေအမြောက်ကားတွေ | စစ်ကားတွေနဲ့ လာပိတ်ပါတယ် ။ သူတို့ လာပိတ်ပိတ်ချင်းမှာဘဲ ကျွန်တော်တို့ ဆေးရုံ ဝင်းတံခါးတွေ ကို ပိတ်ဆို့ပြီး လုံခြုံရေး သမားတွေက နေရာယူပါတယ် ။ ဒီတော့ ရန်သူက အရိုးဆေးရုံဘက်ကို ပြုံဝင် ချသွားပါတယ်
အရိုးဆေးရုံထဲရောက်တော့ သူတို့ ဘယ်သွားရမလဲ မသိဖြစ်နေတဲ့အချိန် ခြံစည်းရိုးကပ်ရပ်မှာ ရှိနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ Dental ဝင်းထဲကို ခြံစည်းရိုးကျော်ဝင်ဖို့ လုပ်ပါတယ် ။ ပထမဆုံး အသံဗုံး နှစ်လုံးပစ်ပါတယ် ။ အသံဗုံးကြားကြားချင်းမှာ Dental ဘက်က ကျွန်တော်တို့ လူအုပ်က နည်းနည်းလန့်ပြီး ပြေးဖို့ လုပ်ကြတယ် ။
ဒါပေမယ့် ချက်ချင်း လူအုပ်ကို ကွပ်ကဲနိုင်လိုက်တယ်။ တဆက်တည်းဘဲ လုံခြုံရေး သမားတွေက Shield တွေ ကိုင်ပြီး ရှေ့က နေရာယူ အဲ့ဒီ Shield တွေကို တဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ ပြန်ရိုက်တယ် အနောက်က ကျွန်တော်တို့ ဆရာဝန်တွေ ဆေးကျောင်းသားတွေကလည်း ဟေး ဟေး ဟေး ဆိုပြီး ဝိုင်းညာသံတွေ ပေးကြရော လူ တထောင်လောက် ရှိနေတဲ့ လူအုပ်က ပေးတဲ့ ညာသံ ဆိုတော့ ဟိနိးခနဲ ဟိန်းခနဲ ထွက်လာတာ ဒီအသံတွေကြားပြီး ဒီလူအုပ်ကို မြင်တော့မှ ရန်သူက ခြံစည်းရိုး မကျော်ရဲတော့ဘဲ ၆၂ လမ်းပေါ်ကို ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ် ။
ချက်ချင်းဘဲ ကျွန်တော်တို့ အလျင်အမြန်ဆုံးဖြတ်ချကိချတယ် လမ်းကြောင်းရှာတယ် ဒီ Milk Tea Alliance နေ့မှာ ငါတို့ လမ်းပေါ်ကို ထွက်ဖြစ်အောင်ကို ထွက်မယ်လို့ ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံး ဆုံးဖြတ်တယ် ငါးယောက် တတန်းမှာ မိန်းကလေးတွေကို အလယ်က ထားတယ် လက်တွေကို သံကြိုးဆက် ချိတ်ခိုင်းတယိ ဒီကောင်တွေ ဝိုင်းရင် ဝင်ဆွဲရင် ကိုယ့်လူကို လုံးဝ အပါမခံဖို့ မှာတယ် ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ medical family စစ်ကြောင်းဟာ ထိုင်သပိတ်လုပ်မယ့်နေရာကို အောင်မြင်စွာရောက်ခဲ့တယ် ထိုင်သပိတ်ကို ပူးပေါင်းနိုင်ခဲ့တယ် ။ စိတ်မကောင်းစရာ တခုကတာ့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ မြောက်ဘက် ကပ်ရပ်က ခုတင် ၃၀၀ ဆေးရုံက ဆရာဝန် ၁၀၀၀ ကျော်ကတော့ မထွက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ အဆိုပါ ဆရာဝန်အားလုံးလည်း ဘေးကင်းရာကို ရောက်ပါပြီ။
သင်ခန်းစာယူစရာက ကိုယ့်လူတွေ ညီဖို့ အင်မတန်လိုတယ် သူတို့ အသံဗုံးနဲ့ ပစ်တဲ့အချိန် ကျွန်တော်တို့ ကစဉ့်ကလျား ထပြေးရင် သူတို့က ဝင်ရိုက်တော့မှာ လူအရမ်းညီတော့ ရန်သူက ဖြုံသွားတယ် ကျေးဇူးတင်စရာအကောင်းဆုံးကတော့ မန်းလေးမြို့ပေါ်က လူမှုကူညီရေးအသင်းများနဲ့ ပြည်သူတွေဘဲ ကျွန်တော်တို့ စစ်ကြောင်းထွက်လာပြီဆိုတာ သိတာနဲ့ ရန်သူက အနောက်ကနေ ရေကားနဲ့ ထပ်ချပ်မကွာလိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်
ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေနဲ့ လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေက လမ်းမပေါ်မှာ အတားအဆီးတွေနဲ့ တပြ ပြီး တပြ ပိတ်ဆို့ပေးကြတယ် ။ တကယ်ကို ညီညာတဲ့ ပြောက်ကျားတိုက်ပွဲပါဘဲ ခုတင် ၃၀၀ ထဲမှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်တွေ အားလုံးကိုလည်း ပြည်သူတွေက ဆိုင်ကယ်တွေ ၊ တုတ်တုတ်သုံးဘီးတွေ | လူမှုကူညီရေးကားတွေနဲ့ ကယ်ထုတ်ပေးကြတယ် ။ ဒါကြောင့် ပြည်သူသာ အဓိက ပါဘဲလို့ ။
ဟေ့ ….အာဏာရှင် မင်းတို့ ဘယ်လောက်ပိတ်ပိတ် ငါတို့ လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီ 💪 အရေး တော်ပုံ အောင်ရမည် ရွှေမန္တလေးသားတွေဆီက သင်ယူရမယ့် သင်ခန်းစားတစ်ခု ရွှေမန္တလေး ဘာကြောင့် ဒီနေ့ အောင်မြင်ခဲ့လဲ? ဒီနေ့ ဖြစ်စဉ် ကို ပြောပြပါ့မယ် ရွေမန်းမြို့က အကြီးဆုံး သပိတ်စစ်ကြောင်း ဖြစ်တဲ့ Medical နှင့် Engineer ကို သူတို့ အညှိုးထားနေတာ ကြာပါပြီ။
ခုတင် ၃၀၀ သင်ကြားရေးဆေးရုံ | သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) နဲ့ အရိုးအထူးကု ဆေးရုံ တွေ တန်းစီ ရှိနေတဲ့ ၆၂ လမ်းပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ သပိတ် စစ်ကြောင်းမထွက်နိုင်အောင် ရေအမြောက်ကားတွေ | စစ်ကားတွေနဲ့ လာပိတ်ပါတယ် သူတို့ လာပိတ်ပိတ်ချင်းမှာဘဲ ကျွန်တော်တို့ ဆေးရုံ ဝင်းတံခါးတွေကို ပိတ်ဆို့ပြီး လုံခြုံရေး သမားတွေက နေရာယူပါတယ် ။
ဒီတော့ ရန်သူက အရိုးဆေးရုံဘက်ကို ပြုံဝင်ချသွားပါတယ် အရိုးဆေးရုံထဲရောက်တော့ သူတို့ ဘယ်သွားရမလဲ မသိဖြစ်နေတဲ့အချိန် ခြံစည်းရိုးကပ်ရပ်မှာ ရှိနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ Dental ဝင်းထဲကို ခြံစည်းရိုးကျော်ဝင်ဖို့ လုပ်ပါတယ် ။ ပထမဆုံး အသံဗုံး နှစ်လုံးပစ်ပါတယ် ။ အသံဗုံးကြားကြားချင်းမှာ Dental ဘက်က ကျွန်တော်တို့ လူအုပ်က နည်းနည်းလန့်ပြီး ပြေးဖို့ လုပ်ကြတယ် ။
ဒါပေမယ့် ချက်ချင်း လူအုပ်ကို ကွပ်ကဲနိုင်လိုက်တယ်။ တဆက်တည်းဘဲ လုံခြုံရေးသမားတွေက Shield တွေ ကိုင်ပြီး ရှေ့က နေရာယူ အဲ့ဒီ Shield တွေကို တဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ ပြန်ရိုက်တယ် အနောက်က ကျွန်တော်တို့ ဆရာဝန်တွေ ဆေးကျောင်းသားတွေကလည်း ဟေး ဟေး ဟေး ဆိုပြီး ဝိုင်းညာသံတွေ ပေးကြရော လူ တထောင်လောက် ရှိနေတဲ့ လူအုပ်က ပေးတဲ့ ညာသံ ဆိုတော့ ဟိနိးခနဲ ဟိန်းခနဲ ထွက်လာတာ ဒီအသံတွေကြားပြီး ဒီလူအုပ်ကို မြင်တော့မှ ရန်သူက ခြံစည်းရိုး မကျော်ရဲတော့ဘဲ ၆၂ လမ်းပေါ်ကို ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ် ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ medical family စစ်ကြောင်းဟာ ထိုင်သပိတ် လုပ်မယ့်နေရာကို အောင်မြင်စွာရောက်ခဲ့တယ် ထိုင်သပိတ်ကို ပူးပေါင်းနိုင်ခဲ့တယ် ။ စိတ်မကောင်းစရာ တခုကတာ့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ မြောက်ဘက် ကပ်ရပ်က ခုတင် ၃၀၀ ဆေးရုံက ဆရာဝန် ၁၀၀၀ ကျော်ကတော့ မထွက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ အဆိုပါ ဆရာဝန်အားလုံးလည်း ဘေးကင်းရာကို ရောက်ပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေနဲ့ လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေက လမ်းမပေါ်မှာ အတားအဆီးတွေနဲ့ တပြ ပြီး တပြ ပိတ်ဆို့ပေးကြတယ် ။ တကယ်ကို ညီညာတဲ့ ပြောက်ကျားတိုက်ပွဲပါဘဲ ခုတင် ၃၀၀ ထဲမှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်တွေ အားလုံးကိုလည်း ပြည်သူတွေက ဆိုင်ကယ်တွေ ၊ တုတ်တုတ်သုံးဘီးတွေ | လူမှုကူညီရေးကားတွေနဲ့ ကယ်ထုတ်ပေးကြတယ် ။ ဒါကြောင့် ပြည်သူသာ အဓိက ပါဘဲလို့ ။ ဟေ့ ….အာဏာရှင် မင်းတို့ ဘယ်လောက်ပိတ်ပိတ် ငါတို့ လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီ 💪 အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်
Previous post ပြည်သူလူထု ရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အတွက် အဖွဲ့သားတွေ ကို အရေးပေါ်အသက်ကယ်နည်းတွေ သင်ပြပေးပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဝေဠုကျော်
Next post ပြည်သူလူထု နဲ့ အတူ အန္တရယ် တွေကြား ထဲကနေ မကြောက် မရွံ့ ရဲရဲဝင့်ဝင့် ဆန္ဒဖော် ထုတ်နေတဲ့ သန္တာဗိုလ် ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်